Imishini efekethisiwe neyelukiweyo - Abakhiqizi baseChina nabaphakeli
Imikhiqizo yendwangu ende yomlando, manje eyenziwe ngomshini. Ifektri yethu esungulwe ngo-1984, sinokuhlangenwe nakho okuningi ngemikhiqizo efekethisiwe nemithi ephothiwe. Abasebenzi bethu abodwa bangasebenzisa imishini eminingi. Futhi umshini owodwa ungathola ama-20-30pcs imikhiqizo efanayo ngasikhathi sinye. Senza le mikhiqizo yendwangu yokukhiqiza ibe ukusebenza kahle okuphezulu. Lapho-ke amaklayenti angathola ngamanani ashibhile. Singahlinzeka ngemikhiqizo efekethisiwe neyelukiwe. Imifekethiso nemikhiqizo elukiwe ithandwa njengengxenye yomhlobiso wezingubo / izigqoko / izikhwama. I-MOQ ephansi ikakhulukazi nesikhathi sokuhola esifushane sokuklama okwenziwe ngokwezifiso. Amakhasimende amaningi akhetha lokhu ukwenza i-logo / idizayini yabo bese inamathisela kumikhiqizo eyinhloko. Futhi lolu hlobo lwelogo luzinzile ngokwengeziwe, futhi ngemuva kwezikhathi eziningi ugeze usaqhubeka njengolwangempela. I-logo efekethisiwe inomphumela we-3D. Futhi kweminye imiklamo ekhethekile, kungenza ukwakheka kucace. Isibonelo, ezinye izilwane ezinezinwele. Imicu ingenza izinwele zibe ngokoqobo ngokwengeziwe kokubukeka nokuthinta. kepha kolunye uphawu oluncane nezinhlamvu ezilukiwe zingathola imininingwane engcono. Futhi singenza nokwelukiweyo nge-embroidery logo kumkhiqizo owodwa. Futhi sihlala sinikeza ukusikisela okuhle kumakhasimende ethu. Siyakwamukela thumela umklamo wakho kithi!
Ibha yesikhundla / Ibha Yesikhundla Sezempi / Isikhundla Sezempi / ...
Amathegi we-Embroidery & Woven Key